linoo-ayar: ယဉ်ေကျးမှုကို ဖိသတ်ချင်ေနြပီေလာ အသင်ေဆာင်းပါးရှင်
ယဉ်ေကျးမှုကို ဖိသတ်ချင်ေနြပီေလာ အသင်ေဆာင်းပါးရှင်
By သစၥာ | သ​စ္စာ on 6:42 AM ကျွန်ေတာ်ေြပာချင်ေနတဲ့ ကျွန်ေတာ့်အြမင်များ
ေနသန်ေမာင် (ရုပ်ရှင်ဗီဒီယိုထုတ်လုပ်ေရးနှင့် နိုင်ငံေရးသိပ္ပံဘာသာရပ်ေကျာင်းသား)ဆိုသူ ရဲ့ စည်းကမ်းြပည့်၀ေသာ သတင်းများနဲ့ Hip Hop ငိုြငိီးသံများ ေဆာင်းပါးကို ဖတ်ြပီး ကျွန်ေတာ်ေတာ်ေတာ်ေလးကို ၀မ်းနည်းမိသည်။ ထို့ထက် ထိုသို့ေသာ အေတွးအေရးကို ေထာက်ခံေသာ ဘေလာဂ်တစ်ခုကို ေဒါက်တာလွဏ်းေဆွ ဘေလာဂ်စီေဗာက်မှ ေရာက်သွားခဲ့သည်။ ေတာ်ေတာ်ေလးကို ဟုတ်ေနြကသည်ဟု ေတွးမိသည်။ အဲ့ေန့ကတည်းက ဒီပို့စ်ကို ေရးတင်ချင်ေသာ်လည်း မတင်ြဖစ်ခဲ့။ ယခု သွားြကည့်မိေတာ့ ထိုဘေလာဂ်တွင် ေထာက်ခံထားေသာ ေဆာင်းပါး မေတွ့ရိှရေတာ့ပါ။ သို့နှင့် မဇ္ဈိမသို့ ြပန်ေရာက်ေသာ် ထိုအေြကာင်းနှင့်ပတ်သက်၍ ထပ်ြပီးေရးထားေသာ ေဆာင်းပါးကို ေတွ့ခဲ့ရြပန်သည်။
နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ၊ လူမျိုးတစ်မျိုးတွင် ဓေလ့စရိုက် ယဉ်ေကျးမှုများ ရိှြကသည်ချည်းပင် ြဖစ်ပါသည်။ ကျွန်ေတာ်တို့နိုင်ငံတွင်လည်း ကိုယ့်ယဉ်ေကျးမှုနှင့် ကိုယ် ရိှပါသည်။ Hip Hop ြဖင့် ယဉ်ေကျးမှုတစ်ခုကို ပစ်ပယ်သင့်ြပီဆိုေသာ အဓိပ္ပါယ်ြဖင့် Revolution ကို သံုးသွားသည်ကုိ ေတွ့ရသည်။ ပစ်ပယ်သင့်သည် / မသင့်သည် ၊ချုိးေဖာက်သင့်သည် /မသင့်သည် ဆိုသည့် အဆင့်မေရာက်မီ ေဆာင်းပါးရှင်အေနြဖင့် ယဉ်ေကျးမှုဆိုသည်ကို မည်သို့ နားလည်သေဘာေပါက်ပါသနည်း။ မည်သို့ နားလည် ခံယူထားပါသနည်း။ မည်သုိ့ နားလည်ခံယူြပီး ဤသို့ေသာ ေဆာင်းပါးမျိုးကို ေရးချမိပါသနည်း ။
ေဆာင်းပါးရှင်အေနြဖင့် ဒီမိုကေရစီဟူေသာ အနက်အဓိပ္ပါယ်ကို ဘယ်လို နားလည်ထားပါသနည်းဟု ကျွန်ေတာ် ထပ်ေမးချင်ြပန်ေပသည်။ အများြကီး ဆက်စပ်ေနေသာ ေမးခွန်းဟု ကျွန်ေတာ့်အေနြဖင့် ေြပာချင်သည်။ မိမိေရာက်ရိှေနေသာ နိုင်ငံ၏ ယဉ်ေကျးမှု ဖံုးလွှမ်း စိုးမိုးမှုေြကာင့်လား၊ ဒါမှမဟုတ် ကမ္ဘာေပါ်ရိှ မည်သည့်နိုင်ငံမဆို၊ ဒီမိုကေရစီဆိုလှျင် ၎င်းအေနာက်နိုင်ငံတို့၏ စည်းမျဉ်းအတိုင်းသာလှျင် ြဖစ်ရမည်ဟု လက်ခံထားလို့လား.....။ လူ့အခွင့်အေရးဟု ဆိုတိုင်း မိမိနိုင်ငံ၏ ယဉ်ေကျးမှုေဘာင်ကို ေကျာ်ြဖတ်သင့်သည်ဟ့ု ေဆာင်းပါးရှင်အေနြဖင့် ယူဆေနသည်ကို ေတွ့ေနရသည်။ သူ့အေနြဖင့် မည်သို့ေသာ အသိုင်းအ၀ိုင်းြကားတွင် ေမွးဖွားရှင်သန် လာခဲ့သည်ေတာ့ မသိပါ။
ကျွန်ေတာ် Fucking ဆိုသည့် စာတန်းနှင့် ပတ်သက်၍ ေဆာင်းပါးေရးခဲ့ဖူးသည်။ ထုိတုန်းကလည်းေ၀ဖန်ေဆွးေနွးြက၏။ ဒီမိုကေရစီ နိုင်ငံများ၊ အေနာက်နိုင်ငံများတွင် ဤသို့ေသာ စကားလံုးကို မည်သို့ေသာ ပုဂ္ဂိုလ်များသာလှျင် အသံုးြပုြကသည်ကို ေတွ့ရိှနိုင်သည်။ ေဆာင်းပါးရှင်အေနြဖင့် ပိုမိုသိနိုင်မည်ဟု ထင်မိသည်။ ြပီးေတာ့ ၎င်းနိုင်ငံများအေနြဖင့် ညစ်ညမ်းစွာ ဆဲဆိုမှုကို လိုလားြကသူချည်းလား။ အေနာက်နိုင်ငံသားတိုင်း မရိုင်းြကပါ။ အေနာက် ဒီမိုကေရစီနိုင်ငံများနှင့် မိမိ အမိြမန်မာြပည်ရဲ့ ယဉ်ေကျးမှုနှင့် ကိုက်ညီပါရဲ့လား။ ဆဲေရးတိုင်းထွာေနေသာ သီင်္ချင်းများကို အဟုတ်ြကီးလုပ် နားေထာင်ေနြကေသာ လူငယ်ထုကို အမှားထဲကို ထပ်ြပီးတိုး၀င်ေအာင် ြပုလုပ်ေနသည်က မအပ်စပ် မလုပ်သင့် မလုပ်ထိုက်ေသာ အလုပ်ကို လုပ်ေနသည်ဟု ကျွန်ေတာ် ေကာက်ချက်ချပါသည်။ ဒါမှမဟုတ် မိမိေရးေသာ ေဆာင်းပါးတစ်ခုေြကာင့် ြမန်မာလူငယ်ထုအေပါ် မှားယွင်းေသာ အေတွးအေခါ် ဆိုးကျိုးများ ေပါ်လာနိုင်သည်ကို မစဉ်းစား မဆင်ြခင်မိသည်လား ။
ဒါ လူ့အခွင့်အေရးကွ.... ဆိုခွင့်ရိှသည်ဟု ဆိုလှျင် မခက်ပါြပီေကာ။ အဘယ့်ေြကာင့် ထိုသီချင်းများ ေခတ်စားကာ နာမည်ေကျာ်ြကား လာပါသနည်းဟူသည်...... ြမန်မာလူမျိုးများသည် လှျို့၀ှက်ေသာအေြကာင်းအရာများကို အလွန်စိတ်၀င်စားတတ်ြကသည်။ သီချင်းဆိုလှျင် အေခွမထွက်ခင် Sample အေနြဖင့် ထွက်ေသာ အေခွများကို စိတ်၀င်စားြကသည်။ ဟိုအဆိုေတာ်က ဘယ်သူနဲ့ ဘယ်လိုဆိုလှျင် မရမကေအာင် လိုက်လံရှာေဖွ ၀ယ်ယူတတ်ြကသည်။ ယခုလည်း ထိုနည်းလည်းေကာင်းပင်ြဖစ်သည်။ ရိုင်းစိုင်းေသာ အဆိုမျိုးကို လူငယ်ထုအေနြဖင့် သာမက လူြကီးများပါ အထူးတဆန်း နားေထာင်ချင်ြကသည်။ လိုက်ရှာြကသည်။ လိုက်၀ယ်ြကသည်။ မိန်းကေလးများ နားမေထာင့်သင့် ဆိုေပမယ့် နားေထာင်ြကသည်ဆိုသည်မှာ ဤအချက်များေြကာင့် အများဆံုးပါ၀င်ြကသည်။ ဘာြဖစ်ြဖစ် နားေထာင်ဖူးချင်ြကသည်။ ထုိသို့ြဖင့် ထုိအဆိုေတာ်များ နာမည်ြကီးြကပါသည်။
ထိုသို့ဆိုလှျင် နာမည်ြကီးချင်တိုင်း ရိုင်စိုင်းေသာ အသံုးအနှုန်းမျိုးြဖင့် လိုက်ဆိုြကလှျင် မခက်ပါြပီေကာ။ ထို့ထက် ငါတို့နိုင်ငံရဲ့ ယဉ်ေကျးမှုကို ချိုးေဖာက်သင့်ြကြပီဟုဆိုလှျင် မခက်ပါြပီေကာ အသင်ေဆာင်းပါးရှင် ေနသန်ေမာင်။ ေခတ်ေရစီးေြကာင်း ေခတ်ေရစီးေြကာင်းဆိုြပီး မိမိနိုင်ငံရဲ့ ယဉ်ေကျးမှုကို ဖိသတ်ချင်ေနြပီေကာ အသင်ေဆာင်းပါးရှင်၊ လူ့အခွင့်ေရး ဆိုြပီး မိမိနိုင်ငံရဲ့ မျိုုးဆက်သစ်များအေပါ် အေတွးအေခါ်မှားများကို သွတ်သွင်းေနြပီေကာ အသင်ေဆာင်းပါးရှင်။ ဒီမိုကေရစီဆိုသည်မှာ ထိုသို့ေသာ ရိုင်းစိုင်းေသာ စာသားအသံုးအနှုန်း ၊ သီချင်းများကို အားေပးသည်ဟု လူငယ်ထုများအေပါ် ထင်ြမင်ေစချင်သေလာ အသင်ေဆာင်းပါးရှင် ။
24 Response to 'ယဉ်ေကျးမှုကို ဖိသတ်ချင်ေနြပီေလာ အသင်ေဆာင်းပါးရှင်'
http://linoo-ayar.blogspot.com/2009/01/blog-post_25.html?showComment=1232934749273#c2001215318434934085'> January 25, 2009 at 5:52 PM
http://linoo-ayar.blogspot.com/2009/01/blog-post_25.html?showComment=1232968667100#c2412700572639916888'> January 26, 2009 at 3:17 AM
ခက်တယ်ဗျ အမှန်ေြပာရရင် လူေတွအကျင့်စာရိတ္တ ပျက်လာ
http://linoo-ayar.blogspot.com/2009/01/blog-post_25.html?showComment=1232994005720#c3827219833874503661'> January 26, 2009 at 10:20 AM
မှန်ပါ၏၊ ေဆာင်းပါရှင်အဆိုကို ေလးေလးနက်နက် ေထာက်ခံ အပ်ပါသည်ခင်ဗျား။ အဟတ်ဟတ် :)
http://linoo-ayar.blogspot.com/2009/01/blog-post_25.html?showComment=1233025882812#c6417779088309211222'> January 26, 2009 at 7:11 PM
http://linoo-ayar.blogspot.com/2009/01/blog-post_25.html?showComment=1233029158150#c475510323346525078'> January 26, 2009 at 8:05 PM
လူေတွက ခက်တယ် ေခတ်ဆန်တာ ၀တ်တိုင်း တစ်မျိုးထင်တက်တယ်
ေခတ်နဲ့အညီ၀တ်ေနေပမယ့် အဲလို သီချင်းမျိုးကို လံုး၀ အားမေပးတက်ဘူး
http://linoo-ayar.blogspot.com/2009/01/blog-post_25.html?showComment=1233116959328#c386719983819700196'> January 27, 2009 at 8:29 PM
ကိုလင်းဦးေရ ခုေခတ်လူငယ်ေတာ်ေေတာ်များများ ရုိေသကိုင်းရှုိင်းမှု့ အားနည်းလာတာ ကိုယ်ေတွ့ြကံူေတွ့ ရပါတယ်။
http://linoo-ayar.blogspot.com/2009/01/blog-post_25.html?showComment=1233123133639#c5086875587821667856'> January 27, 2009 at 10:12 PM
အရမ်းေကာင်းတဲ့ အေတွးအေခါ်ပို့စ်ေလးပါ တကယ့်ကို တန်ဖိုးရှိပါတယ်
http://linoo-ayar.blogspot.com/2009/01/blog-post_25.html?showComment=1233123287858#c1977807547221648796'> January 27, 2009 at 10:14 PM
ကျွန်ေတာ်ကေတာ့ လူေတွထဲမှာ ဆိုးတဲ့လူေတွရှိသလို... ေကာင်းတဲ့သူေတွလည်း ရှိတယ်လို့ ခံယူထားတယ်။ ဆိုးသွမ်းေနတဲ့ ေယာက်ျားေတွ ရှိသလို၊ ဆိုးသွမ်းေနတဲ့ မိန်းမေတွလည်း ရှိပါတယ်။ ဒါေြကာင့် မိန်းမပျက်ေတွအေြကာင်း သီချင်းလုပ်ဆိုလို့ မိန်းမေတွအားလံုး ပျက်ဆီးေနြပီလို့ မယူဆသင့်ဘူးလို့ ထင်တယ်။
ေဂျာက်ဂျက်သီချင်းနဲ့ ပတ်သက်ြပီး မဇ္ဇိုမက အင်တာဗျူးကိုလည်း သိပ်သေဘာမေတွ့ပါဘူး... တကယ်ဆိုရင် မိန်းမပျက်ေတွအေြကာင်း ဆိုထားတာ မိန်းမပျက်တချို့ကိုပါ ေမးသင့်တယ်လို့ထင်တယ်။ အခုအေြဖက တစ်ဖက်သတ်လိုြဖစ်ေနတယ်လို့ ထင်တယ်။ (ကျွန်ေတာ့်အြမင်ပါ)
ကျွန်ေတာ် အထက်ကလိုေြပာလို့ ေဂျာက်ဂျက်ကို အြပည့်အ၀ ေထာက်ခံတယ်လို့ မဆိုလိုပါ။ ဒါေပမယ့် အဲလိုသီချင်းမျိုးေတွြဖစ်လာတာ လက်ေတွ့မှာလည်း တကယ်ရှိလို့ဆိုတာေတာ့ ြငင်းမရနိုင်ဘူးဆိုတာ သိေစချင်တယ်။ `ပုပ်လို့ေပါ် ဟုတ်လို့ေကျာ်´ ဆိုတဲ့ စကားလိုေပါ့ဗျာ။
မဇ္ဇိုမမှာ အင်တာဗျူးေြဖထားတဲ့ အမျိုးသမီးငါးေယာက်ကလည်း `အရမ်းမိုက်ရိုင်းတယ်...´ လို့ ေြဖထားတယ်။ တကယ်ဆို အဲဒီသီချင်းစာသားေတွက သူတို့ကို ေစာင်းြပီးဆိုတာမှ မဟုတ်တာ (စိတ်ဆိုးေနတာ သိပ်လက်ေတွ့မကျဘူး လို့ထင်တယ်) `မိန်းမေတွ မေကာင်းဘူးကွာ´ လို့ ေြပာတိုင်း ရှိသမှျမိန်းမေတွ လိုက်ြပီး စိတ်ဆိုးေနတာက မြဖစ်သင့်ဘူးလို့ ထင်တယ်။ (မဟုတ်ဘူးလားဗျာ...)
ေလာကြကီးမှာဆိုးတဲ့လူဆိုတာ ရှိြပီးသား။ အဲလိုလူေတွကို ေ၀ဖန်ပုတ်ခတ်တာကလည်း ရှိမှာပါပဲ။ အဲဒီလို ပုတ်ခတ်တဲ့အတွက် ေကာင်းတဲ့လူေတွက ဆိုးတဲ့ လူေတွဘက်ကေန သွားြပီး ခံြပင်းေဒါသထွက်ေနတာက သိပ်မဟုတ်ဘူးလို့ထင်တယ်။
အဲဒီေတာ့ ကျွန်ေတာ့်အြမင်ကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ေြပာရရင်... အဲဒီလိုသီချင်းဆိုေနတဲ့သူေတွကို ထိုင်ြပီး အြပစ်တင်ေနမယ့်အစား အဲဒီလိုအေြခအေနေတွကေန တိုးတက်ေအာင် ဘယ်လိုြပုြပင်သင့်တယ်၊ ဘယ်လို ြမှင့်တင်ဖန်တီးရမယ် ဆိုတာကို အေြဖထုတ်၊ ေဆွးေနွးြခင်းက ပိုလက်ေတွ့ကျမယ်လို့ ထင်တယ်။ ြပီးေတာ့ သူတစ်ပါးကို ညစ်ညမ်းစွာ ဆဲဆိုေစာင်းေြမာင်း သီဆိုေနတဲ့သူကို သွားြပီး အေရးတယူြပု၊ ေဒါသထွက်ေနမယ့်အစား ကိုယ့်အလုပ် ကိုယ်လုပ်ေနတာက ိုအြဖစ်သင့်ဆံုးလို့ထင်တယ်။ ေလာကြကီးမှာ ဆဲဆိုတတ်တဲ့သူဆိုတာမျိုးကို ေရှာင်လွှဲလို့မှ မရနိုင်ဘဲဗျာ...။ အရှိကို အရှိအတိုင်း လက်ခံထားသင့်ပါတယ်။
http://linoo-ayar.blogspot.com/2009/01/blog-post_25.html?showComment=1233128456438#c1177651162793448111'> January 27, 2009 at 11:40 PM
လာေရာက်ေဆွးေနွးသူ အားလံုးကို ေကျးဇူးတင်ရိှပါေြကာင်း၊ ကိုဟန်သစ်ြငိမ်ေရ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း စိတ်ထဲရိှတဲ့အတိုင်း ေဆွးေနွးတဲ့အတွက် ေကျးဇူးပါ
http://linoo-ayar.blogspot.com/2009/01/blog-post_25.html?showComment=1233145105209#c6527097699282268966'> January 28, 2009 at 4:18 AM
စဉ်းစားစရာေကာင်းတဲ့ အြမင်ေတွကို လာဖတ်သွားတယ်
http://linoo-ayar.blogspot.com/2009/01/blog-post_25.html?showComment=1233221127762#c734411843370990189'> January 29, 2009 at 1:25 AM
some peoplae think get democracy means can do everything.
It's not true, must be balance with our culture.
http://linoo-ayar.blogspot.com/2009/01/blog-post_25.html?showComment=1233258554664#c2015354235776969712'> January 29, 2009 at 11:49 AM
http://linoo-ayar.blogspot.com/2009/01/blog-post_25.html?showComment=1233330797938#c939744525468278062'> January 30, 2009 at 7:53 AM
ပိုစ်ကို ေ၀ဖန်ဖို့ အခွင့်အေရးမရှိပါဘူးဗျာ၊ ေရှ့က ကိုလင်းဦး ေရးသားထားတာလည်းေကာင်း၊ ကိုဟန်သစ်ေ၀ဖန်တာေလးေတွလည်း ဖတ်ရင်းနဲ့ပဲ ဗဟုသုတ ေတွမှျေ၀ရယူသွားပါတယ်ဗျာ :)
http://linoo-ayar.blogspot.com/2009/01/blog-post_25.html?showComment=1233469769466#c4001356878652050385'> January 31, 2009 at 10:29 PM
အဲေဆာငး်ပါးနဲ့ ပတ်သတ်ြပီး ဖတ်ခဲ့ရပါတယ်။
ဘယ်ေနရာမဆို အေကာင်းနဲ့ အဆိုးအြမဲရှိေနတတ်လို့ အေကာငး်ေရာ အဆိုးေရာ မှျမှျတတ လက်ခံနိုင်ရင် အိုေခမယ်ထင်ပါတယ်။
http://linoo-ayar.blogspot.com/2009/01/blog-post_25.html?showComment=1233494320877#c1079200963365227602'> February 1, 2009 at 5:18 AM
ကိုလင်းဦးေရ .. အခွင့်မြကံုလို့ မေရာက်တာ ြကာေပမဲ့ ...
အခု ေရာက်လာေတာ့ လည်း ပိုစ့်ေကာင်းတစ်ခုနဲ့ တန်းတိုးေနတာပဲ ...
ဟုတ်တယ်ကိုလင်းဦးေရ .. ေနရာတိုင်းမှာ သူဟာနဲ့သူမှန်ေနတယ်ဆိုေပမဲ့
လက်မခံသင့်တဲ့ မှန်ြခင်းေတွလည်း ရှိေနတယ်ဆိုတာကို သိထားသင့်တယ်ဗျာ
http://linoo-ayar.blogspot.com/2009/01/blog-post_25.html?showComment=1233494392168#c475591553529187378'> February 1, 2009 at 5:19 AM
ကိုလင်းဦးေရ ဆင်ြခင်နိုင်တဲ့ စွမ်းအားနဲ့ နားလည်နိုင်မှု စွမ်းအား နည်းပါးြပီး သကာလ လုပ်ချင်တာေတွက များတတ်တဲ့ လူေတွဟာ အမှားအယွင်း တစ်ခုခုလုပ်မိတာနဲ့ တစ်ခုခုကို အေြကာင်းြပတတ်ြကတယ်။ ခုလည်း ဒီမိုကေရစီကို ဗန်းြပချင်ြကတယ်။ ဒီမိုကေရစီ ဆိုတာဘာလည်း အတွင်းကျကျ နားလည်ထားသင့်တယ်။
http://linoo-ayar.blogspot.com/2009/01/blog-post_25.html?showComment=1233985105002#c4358206796997966032'> February 6, 2009 at 9:38 PM
ကိုလင်းဦးေရ စဉ်းစားေတွးေခါ်ြပီးေရးထားတာ အရမ်းမှန်ပါတယ် ...
http://linoo-ayar.blogspot.com/2009/01/blog-post_25.html?showComment=1234090028235#c1929198843413133917'> February 8, 2009 at 2:47 AM
ေဖါက်ထွက်တာကို ြကိုက်တယ်၊ ဝါးလံုးသိမ်း ရိုက်တာကိုမုန်းတယ်၊ Underground ဟာ နိုင်ငံတကာ ေတးဂီတ အြဖစ်ရှိေနတာပဲ မထုတ်ပါဖူးလို့ ဆိုထားတဲ့ သီချင်းကိုမှ မီဒီယာက ဘာလို့ အစ ဆွဲထုတ်တာလဲ၊ ၂၀၀၂ေလာက်ကတည်းက အွန်လိုင်းမှာ အတံုးလိုက် အတစ်လိုက် ဆဲဆိုထားတဲ့ သီချင်းေတွ ကို မေြပာတာ ဒီမီဒီယာသမားေတွ ဒီအချိန်က အွန်လိုင်း မသံုးတတ်ေသးလို့လား၊ ဟိုသီချင်းထက်စာယင် ေဂျာက်ဂျက်ဆိုတာ ေပါ့ေပါ့ေလး၊ အင်း ဝိဝါဒ ကွဲစရာေတွ ြဖစ်စရာပဲ ..မေြပာေတာ့ ပါဖူးေလ။
http://linoo-ayar.blogspot.com/2009/01/blog-post_25.html?showComment=1234929069829#c3250547677875945643'> February 17, 2009 at 7:51 PM
ဒီပို့စ်ေလးကို အခုမှဖတ်ြဖစ်တယ်.. ဖတ်ရင်းနဲ့ စိတ်၀င်စားစရာေကာင်းလို.. ၀င်ေဆွးေနွးြကည့်လိုက်ဦးမယ်ဆိုြပီး မန့်လိုက်တာ သံုးမျက်နှာ ေကျာ်သွားလို့ ကျွန်ေတာ့် blog မှာတင်လိုက်တယ်... အကို စိတ်မရှိပါဘူးေနာ်.. လာြပီးဖတ်လိုက်ပါဦးဗျာ...
http://linoo-ayar.blogspot.com/2009/01/blog-post_25.html?showComment=1235385483481#c5592163713571061551'> February 23, 2009 at 2:38 AM
ကိုလင်းဦး ပိုစ့်က ေနာက်ဆံုးေမးသွားတာေလးေတွကို သေဘာကျတယ်။
ကိုဟန်သစ်ြငိမ်ရဲ့ ကွန်မန့်ကို သေဘာတူတယ်။
ကိုဒူကဘာေြပာတာလည်း စဉ်းစားစရာ ြဖစ်တယ်။
ကျွန်ေတာ်က ဘာေြပာရပ။ း)
http://linoo-ayar.blogspot.com/2009/01/blog-post_25.html?showComment=1238250438393#c3994273877589483292'> March 28, 2009 at 7:27 AM
ူူလူေတွေတာ်ေတာ်များများ ေအာ်ဟစ်ေြပာဆိုေနြကတဲ့ ေခတ်ေရစီးေြကာင်း
http://linoo-ayar.blogspot.com/2009/01/blog-post_25.html?showComment=1239268842640#c4584878775616801281'> April 9, 2009 at 2:20 AM
တကယ်ေကာင်းတဲ့ အေတွးအေခါ် နဲ့ ယူဆချက်ေလးပါပဲ
ကျေတာ် ဂျာမနီလူမျိုုး၊ အေမရိကန်လူမျိုး၊ ရုရှ လူမျိုး၊ ေနာက် ကိုရီးယားလူမျိုး တစ်ချို့ နဲ့ ဆက်ဆံဖူးပါတယ်၊ ကျေတာ့် ကျင်လည်ရတဲ့ပတ်၀န်းကျင်ေြကာင့်လား ေတာ့ မသိဘူးဗျ၊ အဲဒီလူ ေတွ အားလံုး ေတာ်ေတာ်ေလးကို ယဉ်ေကျးြကတယ် ... ကိုလင်းဦး ေြပာသလိုမျိုး ေပါ့ Fucking ဆိုတဲ့စကားကုိ သူတို့သိေတာင် မသိတဲ့အတိုင်းပဲဗျ၊ ဒါေြကာင့် Fucking ဆိုတဲ့စကားကုိ စတိုင်လ်လိုလို ဘာလိုလိုနဲပ လက်စွဲသံုးြပီး တြခားစကားေတွနဲ့ ဘာမှ သိမထူးဘူးလို့ ယူဆေနတဲ့ လူေတွအေနနဲ့ကျေတာ့လဲ လူ့သေဘာသဘာ၀ အရ သူတို့ ကျင်လည်ရတဲ့ ပတ်၀န်းကျင်နဲ့ လူအဖွဲ့ အစည်းေြကာင့်လို့ထင်တယ်ဗျ။ ဒါေပမယ့် ဘယ်လိုပဲ ြဖစ်ြဖစ် အခု ကိုလင်းဦး တင်ထားတဲ့ ပိုစ့်ေလးကေတာ့ အဲဒီလို လူ့အဖွဲ့အစည်းကေန မေကာင်းတဲ့ အကျင့်စရိုက်ေတွကို တချို့လူငယ်ေတွ အတုယူမမှားေအာင် အတိုင်းအတာ တစ်ခုအထိ အေထာက်အကူြပုေနတယ်ဗျာ.. ေကျးဇူးတင်ပါတယ် ပိုစ့်အတွက် :)
http://linoo-ayar.blogspot.com/2009/01/blog-post_25.html?showComment=1239272319592#c7818665853477859605'> April 9, 2009 at 3:18 AM
ကုိဟန်သစ်ြငိမ်း ေြပာသလို လူတိုင်း ကိုယ့်အလုပ်ကိုလုပ် ဆိုရင်ေတာ့ဗျာ ဘာလို့ ကျေတာ်တို့ အခုလို ဘေလာ့ဂ် ေတွ ေရးေနေတာ့မလဲဗျာ၊ ေြပာသင့်တာကို ြပုြပင်သင့်တာကိုေတာ့ ေြပာရမှာေပါ့၊ ဘာလို့လဲ ဆိုေတာ့ လူဆိုတာ အသိုင်းအ၀ိုင်း၊ ယဉ်ေကျးမှု၊ လူအဖွဲ့အစည်းနဲ့ ေနတာေလဗျာ၊ ေြပာသင့်တာကိုေတာ့ ေြပာရမယ်ဗျ၊ ကိုယ့်အလုပ် ကိုလုပ်တယ်ဆိုတာလဲ ေကာင်းတာေတာ့ မှန်ပါတယ် ဒါေပမယ့် တခါတေလကျေတာ့ တစ်ကိုေကာင်း ဆန်သလိုမျိုးပဲဗျ။ ဒီေတာ့ ကိုယ့်အလုပ်ကိုလုပ် ရံုနဲ့ လံုေလာက်တယ်ဆိုတာကို ကျေတာ် လံုး၀ သေဘာမကျဘူးဗျ၊ ဒါကေတာ့ ကျေတာ်တိုက်ခိုက်တာ မဟုတ်ပါဘူး အြမင်ကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ေြပာတာပါ။ ဒီလုိပဲ ကျေတာ်တို့ ေဆွးေနွးြပီး အေြဖထုတ်ြကတာေပါ့ဗျာ ..
http://linoo-ayar.blogspot.com/2009/01/blog-post_25.html?showComment=1250486507980#c2679214922435850388'> August 16, 2009 at 10:21 PM